Central Bank to sell $1.6 million through money changers | Myanmar Business Today
HomeBusinessCentral Bank to sell $1.6 million through money changers
Central Bank to sell $1.6 million through money changers
After the dollar rate drastically surged from around K1,300 per dollar before February to K1,720 within just over three months, the Central Bank of Myanmar is planning to sell $1.6 million through money changers on May 13, according to local money changers.
“We are to buy dollars from the central bank and resell them at the rate it set. We will have to invest Myanmar kyats and get commission fees for that,” said Dr. Soe Tun, an owner ofachain of money changers.
The Central Bank of Myanmar, now controlled by the military who staged the coup on February 1, has set the rate at K1,645 per dollar and any individual is allowed to buy up to $1,000.
This is the first time that the Central Bank sells dollars through money changers. Before it used to auction dollars to banks. Even on May 12, it sold $6 million at the rate of K1,650 per dollar.
Following the news of selling dollars through money changers, both dollar rate and gold price in the domestic market ease.
Both dollar and gold price have been on the rise as people try to buy dollar or gold due to the political tormoils and decreasing confidence on the banking system and local currency.
ဖေဖော်ဝါရီလမတိုင်မီက တစ်ဒေါ်လာကို ၁၃၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ရာမှ သုံးလကျော် ကာလအတွင်း ၁၆၄၅ ကျပ်အထိ ဒေါ်လာဈေး မြင့်တက်လာပြီးနောက် ဗဟိုဘဏ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဒသမ၆ သန်းကို ငွေလဲကောင်တာများမှ တစ်ဆင့် မေလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်း နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်ရေး လုပ်ငန်းများမှ သိရသည်။
“ဒေါ်လာအရွက်ကို ရောင်းမှာ၊ ကျွန်တော်တို့က ဗဟိုဘဏ်ဆီက ဝယ်ရမယ်။ ပြီးရင် သူတို့ သတ်မှတ်တဲ့ နှုန်းအတိုင်း ပြန်ရောင်းပေးရတာပါ။ကော်မရှင် ပုံစံမျိုးပဲ။ ဒါပေမဲ့ ငွေတွေ ရင်းရတာပေါ့” ဟု နိုင်ငံခြားငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ဒေါက်တာစိုးထွန်းကပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ ရောင်းချရာတွင် ဗဟိုဘဏ်က သတ်မှတ်ထားသည့် ရောင်းဈေးအတိုင်း တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၆၄၅ ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူသူတစ်ဦးလျှင် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ နှုန်း ဖြင့်ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခင်က အမေရိကန်ဒေါ်လာကို ဈေးပြိုင်လေလံစနစ်ဖြင့် ဘဏ်တွေကိုသာ ရောင်းချခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ငွေလဲ ကောင်တာတွေကနေ တစ်ဆင့် ရောင်းချလာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မေလ ၁၂ ရက်နေ့တွင်လည်း ဗဟိုဘဏ်က ဈေးပြိုင်လေလံစနစ်ဖြင့် ဘဏ်များထံ တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၆၅၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆သန်း ရောင်းချခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့ ရောင်းချမည့် သတင်းထွက်ပေါ်ပြီးနောက်တွင်း စံချိန်တင် မြင့်တက်နေသည့် ရွှေဈေးနှုန်းများလည်း ဒေါ်လာဈေးနှင့်အတူ ပြန်လည် လျော့ကျလာခဲ့သည်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးမတူငြိမ်မှုများ၊ မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် ဘဏ်စနစ်အပေါ် ယုံကြည်မှုနည်းခြင်းတို့ကြောင့် ဒေါ်လာနှင့် ရွှေဝယ်စုလာကြခြင်းကြောင့် ရွှေဈေးနှင့် ဒေါ်လာဈေး မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည်။
Previous articleMost of the companies halt plans to increase investment: Survey
Next articleA Bitcoin Loophole Review Is very important If You’re Taking into consideration Using The Product